उपभोक्ताकाे गुनासाे - खानेपानी नै छैन, के ले हात धुने ? - Upabhokta Nepal
उपभोक्ताकाे गुनासाे – खानेपानी नै छैन, के ले हात धुने ?
Reporter	काठमाडौं	चैत २१, २०७६
काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड —१९ )को सम्भावित जोखिम हुनबाट जोगिन साबुन पानीले दिनमा चार पाँच पटक हात धुनुपर्छ भन्ने सन्देश सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह गरिरेहेको छन् । तर गोकर्णेश्वर तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका स्थानीयवासी खानेपानीकै समस्यामा परेका छन् ।
पानी भरेर घरमा राख्दा लामखुट्टेका कारण डेङ्गुको खतरा बढ्न सक्ने भएकोले सताउने गरेको उपभोक्ता राधिका भण्डारीले बताए । गर्मी बढेसँगै डेङ्गुका बिरामी बढ्ने जनाइएको छ । गोकर्णेश्वर नगरापालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसे मुहान क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराएर मात्र तल्लो भेगमा लैजान काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पटकपटक आग्रह गरेको बताउछन् ।
सो माग लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पटकपटक दिइएको उनले सुनाए । स्थानीय सरकारको मागलाई गम्भीर रुपमा नलिएपछि समस्या आउने भएकाले बेलैमा ध्यान दिन नगरवासीको अनुरोध छ । कागेश्वरीका नगरप्रमुख कृष्णहरि थापा पनि माथिल्लो भागमा पानी वितरणको व्यवस्था गर्न निर्देशनालयलगायत सरोकार भएका निकायलाई पटकपटक अनुरोध गरिएको बताउछन ।्
२०७६ चैत २१ गते शुक्रवार १२:४४ बजे प्रकाशित
नेपाल आयल निगमको निर्देशन पछि उपभोक्ताकाे घरघरमा ग्यास